Amaphakheji avela endaweni yethu yokugcina impahla eChina azothunyelwa yi-ePacket noma i-EMS ngokuya ngesisindo nosayizi womkhiqizo. Amaphakeji athunyelwa evela endaweni yethu yokugcina impahla yase-US athunyelwa nge-USPS. Ngakho-ke, ngenxa yezizathu zokuhamba, ezinye izinto zizothunyelwa ngamaphakeji ahlukile.
Asinakulawula izinkokhiso zamasiko, asinasibopho semali ekhokhwayo yamasiko uma izinto sezithunyelwe njengoba kuyizinqubomgomo nezintela zokungenisa zihluka kakhulu ngokwamazwe. Ngokuthenga imikhiqizo yethu, uyavuma ukuthi iphakethe elilodwa noma amaningi angathunyelwa kuwe futhi ungathola imali ekhokhwayo yamasiko lapho efika ezweni lakho.
Australia, New Zealand Izinsuku zebhizinisi ze-10-21
Mexico, eMelika Ephakathi, i-Ningizimu Melika Izinsuku zebhizinisi ze-15-21
Amanye amazwe Izinsuku zebhizinisi ze-15-21